Odayaasha iyo Waxgaradka galmudug oo ka kulansan Arinta khilaafaadka Maamulkaasi – SBC
Odayaasha iyo Waxgaradka galmudug oo ka kulansan Arinta khilaafaadka Maamulkaasi
Posted by Webmaster on Diseenbar 4, 2011 Comments
Kulan ka dhacay magaalada Gaalkacyo dhanka Galmudug islamarkaana ay isugu isugu yimaadeen wax garadka iyo Odayasha Maamulkaas ayaa waxaa looga hadlay arimo badan oo ay ugu weyneed arinta khilaafaad dhowaan soo kala dhexgalay madaxda sar sare ee Maamulkaas .
Odayaasha ayaa kulankooda waxa ay diirada ku saareen arimaha khilaafka iyagoona u jeediyay masuuliyiinta haya xukunka Galmudug ay sida ugu dhaqsiyaha badan u gaaraan xal hagaagsan hadii kale ay kala noqon doonaan kalsoonida .
Waxaa ay sidoo kale sheegeen in aan loo baahneyn waxyaabahii dhacay dhowaan oo kale islamarkaana ay masuuliyad xoogan saarantahay golaha baarlamanka iyo masuuliyiintiisa, ayna iska ilaaliyaan waxyaabaha masuuliyadooda ku ciraari kara.
Qaar ka mid ah Odayaasha oo la hadlay Xafiiska SBC international ee Gaalkacyo ayaa sheegay in ay aheyd qalad weyn oo ay ka galeen dastuurka maamulka Galmudug iyo masuuliyadoodaba xubno ka tirsan xildhibaanada baalamanka Galmudug oo iyagu qaab aan sharci aheyn ugu dhawaaqay in ay xilkii ka tuureed madaxweynihii maamulkaas.
Marka laga yimaado hadalada Odayaasha waxaa iyana dhankooda jira banana baxyo kala duwan oo ay sameynayaan bulshada gobolka kuwaas oo ay kaga soo horjeedaan baarlamanka Galmudug iyagoona taageero u muujinaya madaxweynaha maamulkaas Maxamed Axmed Caalin.
Wal wal iyo walaac weyn ayaa ka dhashay markii ay soo bexeen khilaafaadka soo kala dhexgalay maamulka galmudug iyagoona ay xaaladu iminka u egtahay mid loo wada istaagayo sidii loo xalin lahaa khilaafaadka jira .